भोलि जेठ ३ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
June 16, 2020 1257
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने तथा दाम्प’त्य जीवन सुखी रहनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धिहरुला’ई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । सुन्दर तथा विलाशि बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरु’को मन आफूतिर लोभ्याउन सकिनेछ । उत्तम बस्त्र,मनपर्ने भोजन तथा विशेष उपा’हार प्राप्तिको योग रहेकोछ । तरपनि समय अनुकुल नरहेकोले यात्रा भरसक नगर्नुहोला ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) काम वा अध्ययन’को शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला । काम गर्दा नीति नियमको पाल’ना नग’र्दा दण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नाले आर्थिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ । भौतिक सम्पति तथा द्रव्य हराउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । प्रेममा अविश्वास गर्नाले टाढिनु पर्ने’ हुन सक्छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा पति पत्नी विच’को सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । दाजुभाइले तपाईँको काममा आर्थिक सहयोग गर्ने हु’नाले मन प्रसन्न रहनेछ । इच्छा तथा मनोकाम’नाहरु पुरा हुनेछन् । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । तरपनि वाहिरी वाता’वरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) अध्यय’नमा समय दिई आफ्नो विद्यालार्ई निखार्ने सकिनेछ । आटेका तथा चाहेका कामहरु गर्न सकिने तथा साथीभाइहरुको राम्रो सहयो’ग प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हु’नेछ भने घर परिवारमा तपाईको कामदेखि सबै प्रशन्न हुनेछन् । तरपनि समय प्रतिकुल रहेको’ले सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) समयले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ । धर्म तथा धर्म विस्तारकाे लागि समय दिनु पर्नेछ भने सस्कार परिवर्तनमा तपाईँको भूमिका महत्वपुर्ण हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्र’मा तपाईँको उच्च स्तरको सहभागिता रहनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेह’रका लागि सम’यले साथ दिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) कष्ट भाव’मा गोचर गर्ने चन्द्रमाले भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला । माया प्रेम गर्ने जोडिहरुले आजको दिन नजिक नहुँदै राम्रो रहनेछ । आर्थिक पाटाहरु कमजो’र रहनेछन् भने व्यापार व्यावसायमा आम्दानि नहुँदा दैनिकी प्रभावित हुनेछ । दिदी बहिनीहरुसँग मनमुटाब बढ्नेछ भने आफन्त तथा साथीभाइहरु तपाईँदेखि टा’डिन सक्छन् ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) पढाइ लेखा’इमा प्रविधिको प्रयोग गरि भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले आफन्त तथा अग्रजहरु खुसी रहनेछन् । पारिवारका साथ स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नि’बीच मायाको डोरो कसिलो हुनेछ । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरस’फाईमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । ‘पुराना समस्या तथा रोगहरु स्वत हल भएर जानेछन् । पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता हात लाग्ने योग रहेकोछ । माया प्रेममा एक अर्का’लाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । तरपनि काम वा अध्ययनको शिलशिलामा वि’देशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) रमाइलो भेटघाट हुने तथा स्वादिष्ष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । शुभ’चिन्तक तथा आफन्तको सल्लाह तथा सुझावलाई शिरो धार्य गर्दै अगाडि बढ्न सके गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । व्यापा’रमा लगानी गरिन मनग्गे आम्दानी हुनेछ भने नया योजनाको रुप रेखा कोर्न सकिनेछ । प्रेममा नजिक भई आफ्ना भावाना साटासाट गर्न पाइने हुँदा पन प्रशन्न र’हनेछ । उपाहार तथा भौतिक सम्पति प्राप्तिको योग रहेकोछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) घरायसि समस्या एक्कासि बढ्नाले अर्थ अभाव हुनेछ । आमा तथा आमासँग मनमुटाव हुँदा मन खि’न्न हुनेछ भने आफन्तको ‘साथ पाइने छैन । समाजसेवामा तथा राजनीतिमा पदको दुरुपयोग गर्दा मान सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । अध्ययनमा समय दिएपनि नतिजाको लागि केही समय कुर्नुनै पर्नेछ । तरपनि कृषि तथा सह’कारि व्यावासायमा भने मनग्गे आम्दानि हुने योग रहेकोछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) परिवार’का साथ जमघट भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममाको गाठो कसिलो हुनुको साथै दाम्पत्य जीवनमा खुसियालि छाउनेछ । दाजुभाइ तथा अन्य इष्टमित्रबाट सहा’योग हुने हुँदा मन खुसी रह’नेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मा’र्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । तरपनि उद्यो’ग तथा व्यापार व्यावसा’यमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) पहिले गरेका कामबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ भने समयमा स्रोत साधन तथा भौतिक सम्पति जुट्नाले चाहेको काम सहजै सम्पादन हुनेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धिहरु हार खानेछन् भने तपाईँको कुरा काट्ने हरुलाई पाठ सिकाउ’न सकिनेछ । परिवारका साथ रमाइलो वाता’वरण तथा हासखेलमा समय बित्नेछ । पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिँदा पनि उत्कृष्ट नति’जाको अपेक्षा गर्न सकनेछ ।
Prevभारत छिर्न लाग्दा सांसद सरिता गिरीलाई नाका बाटै फर्काइयो…
Nextआज थप ३५० संक्रमित भेटिए, कुन जिल्लामा कति थपिए ? हेर्नुहोस्…
डिभोर्सपछि महिलाले अर्को बिहे गरे सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्ने
ओली समूहले राख्यो जिल्ला पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमालेको बोर्ड
बेरोजगार श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै श्रीमानलाई दिईन् १० करोड, श्रीमतीको काम थाहा पाउँदा चकित !
भारत युपीका मुख्यमन्त्री आदित्यले ‘नेपालका माओवादी जस्तै हालत होला’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (109160)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92249)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (91129)